Ungafaki i-imeyili ku-Burner Emuva! | Martech Zone
Ungafaki i-imeyili ku-Burner Emuva!
NgoLwesihlanu, Novemba 18, 2011 Ithempeli laseLavon
Ekugcineni Iposi lezivakashi zeDelivra OkwaMartech, uNeil wahlanganisa nocwaningo olukubuza nonke ukuthi yiziphi ezinye zezingqinamba enibhekene nazo ngezinhlelo zenu ze-imeyili. Omunye wabo kwakungu- ukungabi nesikhathi ukufeza obekufunwa. Ngikuqonda ngokuphelele ukucindezelwa isikhathi; akukaze kube khona amahora anele ngosuku!
Lokho kushiwo kodwa, ngiyakuncenga ukuthi wenze uhlelo lwakho lwe-imeyili lube kuqala. Uma ungakaqali uhlelo lwe-imeyili, yisikhathi esidlule ukuqala. Uma usuqale uhlelo, kepha ube uludalula kabuhlungu, ngikukhuthaza ukuthi uzinike isikhathi sokuhlola futhi unqume ukuthi iziphi izindawo ezidinga ukunakekelwa ngokushesha. Musa ukubeka uhlelo lwakho lwe-imeyili kufayela le- isishisi sangemuva!
Hlola kabusha isu lakho lokuthengisa nge-imeyili
Hlanza ibala futhi isuse amakheli amabi
Dala okusha nokuqukethwe okuthuthukisiwe
Update ikhophi egxile ekubandakanyeni izithameli zakho futhi ibakhuthaze ukuthi benze
Ukuzinika isikhathi sokugxila kuhlelo lwakho lokumaketha nge-imeyili kungaba umehluko ekufinyeleleni izethameli ezinkulu, ukuphinda uhlanganyele izethameli zakho zamanje, nokwenza i-ROI enkulu. Njengoba uNyaka Omusha uza, lesi yisikhathi esifanele sokususa uhlelo lwakho lokumaketha nge-imeyili kusishisi sangemuva ulubeke eqhulwini!
Tags: delivraukumaketha kwe-imeyili ye-delivraisu le-imeyili leminyaka emishaamasu e-imeyili
nRelate amakhasi andisiwe ngokuvakasha kwango-9.6%.
Ukucwaninga kwePew ngomsebenzi oku-inthanethi
Nov 18, 2011 ngo-1: 06 PM
Okuthunyelwe okumnandi, @lavon_temple: disqus! Ngingasho, mathupha, ukuthi i-imeyili ibe nomthelela omkhulu ekukhuleni kwethu kwi-Marketing Technology Blog. Ukube ngangazi umthelela, ngangizowenza ube yinto ebaluleke kakhulu eminyakeni edlule.